Jona 5, 2018 Admin
Coinbase dia mampitombo ny Japana
Coinbase nanambara ny drafitra mba hanomboka birao ao Japana. Ao amin'ny fanambarana, Coinbase hoy izy ireo miara-miasa amin'ny Japoney FSA mba hiantohana ny fanajana ara-dalàna ao amin'ny sehatra rehetra, ary indray mandeha nankatoavina, mikasa hanatitra ny vokatra sy ny tolotra ho an'ny olona ao Japana.
Mandray Fintech Leader Nao Kitazawa
Ao anatin'ny ezaka ataontsika mba hanafainganana ny eran-fananganan'anaka amin'ny cryptocurrency, amin'izao fotoana izao isika nanambara ny fandefasana ny Coinbase ny birao in Japana. Eo ambany ny mpitarika ao amin'ny fatratra-hajaina sy higagana fintech mpitarika, Nao Kitazawa, ny birao vaovao dia hametraka ny fototry ny Japana crypto mpampiasa vola mba mahazo ny isan-karazany ny vokatra Coinbase. Tahaka ny any hafa tsena, dia mikasa ny haka fanahy iniana ny fomba rollout tany Japon, izay midika hoe miasa tanana-in-tànany ny Japoney FSA mba hiantohana ny fanajana ny lalàna eo an-toerana isaky ny dingana.
Breziliana Manokatra kaonty varotra crypto kokoa noho ny nentim-paharazana brokerage kaonty
More olona eo am-piandohan'ny cryptocurrency kaonty varotra any Brezila noho ny nentim-paharazana brokerage kaonty.
Herintaona lasa izay, dia nisy ankizilahy atao hoe Foxbit nanana mitovitovy 100,000 mpampiasa voasoratra anarana. ankehitriny, zareo dia manana 400,000 mpampiasa voasoratra anarana avy tamin'ny Tombanana 1.4 tapitrisa izay efa niloa-kaonty izy sy ny telo lehibe mpifaninana amin'ny latsaky ny roa taona ny fotoana. Ampitahao fa ny teny mafy 600,000 izay manana tahiry brokerage kaonty Ary ny tani-hay ny mahita: Breziliana Nahita cryptocurrency. In 2016, Breziliana nifindra $160 tapitrisa ao ary avy tamin'ny Bitcoin. Taona lasa, dia namely manodidina $2.4 lavitrisa.
"Fa ny bandy izay zatra manafina dolara eo ambany kidoro, ankehitriny dia miafina izany amin'ny Bitcoin,"Hoy i Eduardo Ferreira, lohany ny raharaha iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana Foxbit in London. "Tsy mividy azy io ireo mpianatra. Tena 60 taona, mpamily fiara fitateram-bahoaka," hoy izy.
$150M amidy manerana ny tsena amin'izao fotoana izao
Fahadisoana ny Сrypto mpamatsy vola. Dia ...
fianarana manambara 27% of UK male m...
Tratry ny taona! Nahoana 2019 ≠ 201...